Yintoni omawuyenze ukuze uyeke ukucinga ngeqabane langaphambili | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 21/06/2022 22:59 | Ubudlelwane
Akukho lula okanye kulula ukuphelisa ubudlelwane. Ukutyhila iphepha lixesha elinzima kubantu abaninzi, ngakumbi xa ungayeki ukucinga ngeqabane lakho langaphambili imini yonke. Kule nto, kubalulekile ukuhamba kwiinqanaba ezahlukeneyo zentlungu kwaye ukwazi ukwakha kwakhona ubomi ngendlela engcono kakhulu.
Kwinqaku elilandelayo siza kukunika uluhlu lwezikhokelo ezinokukunceda ulibale ngeqabane lakho langaphambili.
1 Hlonipha izingqisho zentlungu
2 Iimvakalelo zifanelekile kwaye ziyimfuneko
3 Fumana into ekugcwalisa ngenkohliso
4 Kuya kufuneka ujike iphepha kwaye ulibale malunga neqabane langaphambili
5 yiya kwingcali
Hlonipha izingqisho zentlungu
Ngamaxesha amaninzi, kwenziwa impazamo enkulu yokumisela ingcamango yokuyeka ukucinga ngeqabane langaphambili. Kuqhelekile ukuba kunzima ukuyeka ukucinga kwaye uyifezekise yinto eya kuthatha ixesha lakho. Kufuneka uyazi indlela yokuhlonipha izingqisho zokuzila kwaye ube nomonde de kufike ixesha apho kungekho ngcamango malunga neqabane langaphambili.
Iimvakalelo zifanelekile kwaye ziyimfuneko
Ukwahlukana neqabane lakho kuya kuxhokonxa uthotho lweemvakalelo zazo zonke iintlobo, ukusuka ekudabukeni ukuya kulangazelelo okanye ukuziva unetyala. Kuyinto eqhelekileyo ukuba ezi ntlobo zeemvakalelo zenzeke kwaye yiyo loo nto kubalulekile ukuziqinisekisa. Ukuvumela iimvakalelo ezinjalo kungundoqo xa kufikelelwa ekutyhileni iphepha nokuphelisa ukwahlukana.
Fumana into ekugcwalisa ngenkohliso
Kubalulekile ukukhangela into enokubuyisela inkohliso elahlekileyo. Nantoni na ihamba ukuze uyeke ukucinga ngeqabane langaphambili kwaye uphile ngethemba kunye nepositivity imihla ngemihla. Ukuziphazamisa ngezinto ezithile zokuzonwabisa okanye izinto onomdla kuzo kuya kukuvumela ukuba uhlale kwimood kwaye ujabulele ubomi.
Kuya kufuneka ujike iphepha kwaye ulibale malunga neqabane langaphambili
Kufuneka ukwazi ukuguqula iphepha kwaye uqaphele ukuba umjikelo ufikelele esiphelweni. Ukwenza oku, kunokwenziwa isiko lokomfuziselo kwaye amaqhina anqunyulwe ngokuqinisekileyo kunye neqabane langaphambili. Isithethe singundoqo xa kufikwa ukuyeka ukucinga ngomntu kwaye ukwazi ukunandipha ubomi obutsha.
Ukuba kuyimfuneko, unokucela uncedo kwingcali. Abantu abaninzi abakwazi ukuqhawula amaqhina kunye neqabane labo langaphambili bebodwa kwaye baya kufuna uncedo lwengcali. Naluphi na uncedo luncinci xa kuziwa ekwamkeleni ukuhlukana kunye nokuphepha naluphi na uhlobo lokucinga malunga neqabane langaphambili.
Ngamafutshane, akulula ukuyeka ukucinga ngeqabane langaphambili. Umntu ngamnye uhlukile, ngoko ukwazi indlela yokuqinisekisa iimvakalelo ezahlukeneyo kunye nokuvumela ixesha lokuphilisa onke amanxeba kubalulekile. Kubalulekile ukuba ungazigwebi ngendlela engafanelekanga yokucinga ngeqabane lakho langaphambili kwaye wenze konke okusemandleni ukuze intlungu ingapheli ixesha. Ngamanye amaxesha ukuziphawula okanye ukubeka usukelo oluthile kunokukunceda woyise intlungu. Khumbula ukuya kwingcali ukuba awukwazi ukuphelisa iingcamango ezinjalo entloko yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Yintoni omawuyenze ukuyeka ukucinga ngeqabane langaphambili